China XY-2414G Gold Metal Mesh Panel for Lunxury Furniture Decoration Ukwakha kanye nefektri | IShuolong
Iphaneli ye-XY-2414G Gold Metal Mesh yokuhlobisa ifenisha yeLunxury
I-XY-2414G- i-mesh yensimbi ishumekwe kufenisha, futhi inhlanganisela yemeshini yethusi yasendulo nohlaka lwokhuni kwenza ukwakheka konke kwefenisha kube ngokunethezeka kakhulu.
Ububanzi beWarp: 1.4mm × 3mm × 4 ngez1.0mm × 10mm × 1
I-Warp Pitch: 63mm
Isisindo: 7.8kgs / m2
Mesh Ubukhulu: 3.0mm
Ukwelashwa Kwaphezulu: upende
Ububanzi obukhulu: 3m
Metal anezikhala ingasetshenziswa ifenisha umhlobiso, futhi iningi antique zethusi metal anezikhala isetshenziswa njengoba umnyango iKhabhinethi. Iphaneli yensimbi yensimbi engagqwali isetshenziswa kakhulu kuma-racks esikhwama sezicathulo ezitolo ezinkulu. Ngokukhanyisa kwezibani, kuqhubeka kuthuthukisa izinga lezimpahla kanye nesitayela esiphelele sesitolo.
Ngaphezu kwalokho, uma udinga ukwengeza izinto zokwakha i-mesh yensimbi kumaphrojekthi akho aqhubekayo noma azayo, sicela uxhumane nathi ngqo. Ngaphezu kwemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezintengo ezihamba phambili, singaphinde sinikeze ngezinsizakalo ezenziwe ngezifiso nezixazululo zokufaka zohlelo lwakho lwamaphrojekthi.
1) PC ngayinye ukupakisha ngephepha, 1-5pcs ebhokisini lokhuni;
1.40 Iminyaka Yesipiliyoni : Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-40 sokukhiqiza ucingo.
3.Ukufakwa & Izesekeli: Singahlinzeka ngezixazululo zezinsimbi zocingo nezesekeli zakho
Uma ufuna uku-oda noma ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe yamatshe wethu wensimbi, ama-pls athatha umyalezo wakho kuwebhusayithi yethu, asishayele noma athumele izidingo zakho ku-imeyili yethu, azokuphendula kungakapheli amahora angama-24!
Esedlule: XY-2414P Insimbi engagqwali flat wire nokwelukiweyo anezikhala screen
Olandelayo: XY-2027GO okuhlobisa Wire Mesh for Ifenisha
XY-D2 Engagqwali Sliver Double Wire Mesh f ...
XY-C1 Ikhishi Ifenisha Idayimane Metal Mesh
XY-2414P Insimbi engagqwali ucingo olwalukiweyo anezikhala s ...
I-XY-D2 Antique Bronze Metal Mesh yeKhabinethi
XY-3110G Antique Brass Mesh Igridi